Rag gaari qaad ku waday oo lagu dilay gobolka Galgaduud | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Rag gaari qaad ku waday oo lagu dilay gobolka Galgaduud
Rag gaari qaad ku waday oo lagu dilay gobolka Galgaduud
Galgaduud (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya subixii Arbacada maanta gobolkaasi lagu dilay laba nin, oo gaari nooca raaxada ku waday qaad, la sheegay in ay ka keeneen dhinaca xuduudda Itoobiya.
Dabley hubeysan ayaa ku weerartay deegaanka Miro-cowleed, oo xigga dhanka deegaanka Gelinsoor ee Waqooyiga Gobolka Galgaduud, waxaana la weeraray, xilli ay ku sii jeedeen Gelinsoor.
Wararka ayaa sheegaya in dableyda dilka gaysatay ay deegaan ahaan ka soo jeeddo Magaalada Caabudwaaq, halka ragga la dilay-na ka soo jeedaan Gelinsoor.
Xiisad ka dhalatay dilka labadaasi nin ayaa laga dareemay deegaanada Ari-cadeys iyo Dhabbad, sida ay dadka deegaanka soo sheegayaan.
Gelinkii dambe ee Sabtidii meel aan sidaasi uga fogayn deegaanka uu dilku ka dhacay ayaa laga qafaashay saddex gabdho, oo deegaan ahaan ka soo jeeda Magaalada Cadaado, iyadoona ay falkaasi afduubka ahi gaysteen maleeshiyaad dhanka Caabudwaaq ka timid.
Maleeshiyadan ayaa ka carootay dil dhawaan wadada xiriirisa Cadaado iyo Caabudwaaq loogu gaystay gabar deegaan ahaan ka soo jeeday Caabudwaaq. Gabadhan ayaa la socotay gaari Candho-meydle oo ka yimid dhanka Magaalada Boosaaso, oo ay rasaaseeyeen maleeshiyo ka soo jeeda Cadaado, xilli uu gaarigu ku safrayay wadada Cadaado iyo Caabudwaaq. Gabadhan ayaana haleeshay rasaastii ay maleeshiyadaasi furayn.
Gobolka Galgaduud ayaa waxaa labadii bilood ee ugu dambeysay ku soo badanayay dilalka iyo weerarada aanooyinka beelaha.
Rag gaari qaad ku waday